ရင်ကျပ်ပန်းနာအတွက် ကရင်ဆေးဆရာကြီး၏ လက်တွေ့ပျောက်ဆေး – Myanmar Magazine
ရင်ကျပ်ပန်းနာအတွက် ကရင်ဆေးဆရာကြီး၏ လက်တွေ့ပျောက်ဆေး
November 23, 2018 November 23, 2018 myanmarmagazine	ကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရ
ဆေးနည်းတွေ စိတ်ဝင်စားသူတွေ စာဖက်ရလွယ်ကူစေရန် ကူးယူမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
ဤဆေးနည်းမှာ ကရင်ဆေးဆရာတစ်ဦးထံမှ ရှိသောဆေးနည်းဖြစ်၏။အကြောင်းမသိလျှင် ရယ်စရာဖြစ်သော်လည်းသုံးစွဲရာ၌မူကား တကယ်စွမ်းသောဆေးနည်းဖြစ်ပေသည်။
(မှတ်ချက်= ချိန်ခွင်ရှိရာအရပ်၌ဖြစ်မူကား အညီအမျှချိန်တွယ်ယူ၍ဖော်စပ်နိုင်ပါသည် )အနည်းငယ်မျှ အပိုအလိုရှိသော်လည်း ရပါသည် အရေးကြီးလှသည်မဟုတ်ပါပေ
ကြက်သွန်နီ ဥ ကြီးကြီး ၅ ဥ
ပုဇွန်ထုပ်အကြီး ၅ ထုပ်
ထန်းလျှက်ခဲအကြီး ၅ ခဲတို့လိုအပ်ပါသည်
ကြက်သွန်နီဥနှင့် ပုဇွန်ထုပ် တို့ကို သန့်ရှင်းအောင်ပြုပြင်ဆေးကြောပြီး နုပ်နုပ်စဉ်းရပါမည်အိုးတစ်လုံးတွင်ထန်းလျှက်ကိုထည့်၍ကျိုပြီးအရည်ဖြစ်လျှင်ကြက်သွန်နှင့်ပုဇွန်စဉ်းပြီးသားကိုထည့်၍မွှေရပါမည်။ ဆားအနည်းငယ် သင်ရုံထည့်ပါ။မတူးမခြစ်ရအောင် မီးနွေးနွေးဖြင့်မွှေပါ ။ပုဇွန်ကျက်လောက်သောအချိန်တွင်ချ၍ အအေးခံထားပါ
ဆေးစားမည့်ဝေဒနာရှင်အား ဆေးကျွေးမည့်နေ့တွင်အစာမကျွေးပဲထားပြီး အထက်ပါဆေးတစ်အိုးချက်ကို တစ်ထိုင်တည်းနှင့် ကုန်အောင်စားစေရပါမည်။ အကယ်၍ တစ်ထိုင်ထဲနှင့် ကုန်အောင်မစားနိုင်ခဲ့သော် အခြားအစားအစာ မကျွေးပဲ ထိုဆေးကိုသာ နား၍ နား၍ ကုန်အောင်စားစေရပါမည် ရေနွေးကြမ်းနှင်လည်းသောက်နိုင်ပါသည်။နှစ်ပေါင်းများစွာစွဲကပ်လာခဲ့သော ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကြီးများဒိဋ္ဌပျောက်ပါသည် အော့အန်ခြင်း ဝမ်းသွားခြင်းအလျင်းမရှိပါ ။
အသက် ၆၀ ကျော် အဘိုးကြီးတစ်ဥိးနှင့် အဘွားကြီးတစ်ဦးတို့အား စာရေးသူ ကိုယ်တိုင်ကျွေးဖူးရာ အဘိုးကြီးကကောက်ညှင်ပေါက်းနှင့် ကျွဲနို့ကို မစားခဲ့ရတာ နှစ်ပေါင်းကြာပြီ ယခုမှပဲ အားရပါးရစားနိုင်တော့သည် ဟုပြောပါသည်အဘွားကြီးက မူကား ရင်ကျပ်ချိန်မှာ ကျပ်မလာတော့လည်း င်ထဲကလေတွေ တက်လိုက်ဆင်းလိုက် ဖြစ်နေတယ် ဟု ပြောပါသည် ။
နည်းပေးသော ကရင်ဆေးဆရာကြီးအား များစွာပင်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။
ထန်လျှက်ခဲ နှင့် ပုဇွန် ကြက်သွန်တို့မှာ မဆီမဆိုင်ဖြစ်သောကြောင့် စာရေးသူကိုယ်တိုင်ပင်ဆေးနည်းကိုရခါစက မယုံကြည်ခဲ့ပေ။
ကိုယ်တိုင်ကုသပေး၍ ပျောက်ကင်းသည်ကို တွေ့သောအခါမှသာ ယုံကြည်မိပါတော့သည်။
ယုံကြည်သည့်အလျောက် မိဘပြည်သူများ ပန်းနာရင်ရင်ကျပ်အတွက် စိတ်မညစ်ရလေအောင် လျင်မြန်စွာ သုံးစွဲကြည့်ပါဟု တိုက်တွန်းရင်း
ဆရာဦးသိန်းလွင် ရေးသားပြုစုသော အိမ်တွင်းသမားတော်ကျမ်း နှင့်လက်တွေ့မြန်မာဆေးစွမ်းကောင်းများ(1991.Jun .29.ရက်နေ့ထုတ်)စာအုပ်မှ ကူးယူမျှဝေပါသည်
← ရိုးရိုး မွေးခြင်း နှင့် ခွဲ မွေးခြင်း တို့၏ အားသာချက်၊ အားနဲ ချက်များ
သာပေါင်းမြို့နယ်တွင် တောဆင်ရိုင်း သတ်ဖြတ်သူများကို အရေးယူ →
၃လ အကြာမှာ ဆီးချိုရောဂါကို လုံးဝ (100% ) ပျောက်ကင်းကြောင်း ဝမ်းသာအားရ ပြောပြနေသော ကရင်ပြည်နယ်. ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့က အဖွားဒေါ်ဝင်း
January 23, 2019 myanmarmagazine Comments Off on ၃လ အကြာမှာ ဆီးချိုရောဂါကို လုံးဝ (100% ) ပျောက်ကင်းကြောင်း ဝမ်းသာအားရ ပြောပြနေသော ကရင်ပြည်နယ်. ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့က အဖွားဒေါ်ဝင်း